Subtitld, isoftware evulekileyo yokukhutshelwa kunye nokuhlela imibhalo engezantsi | Ubunlog
Subtitld, isoftware evulekileyo yokukhutshelwa kunye nokuhlela imibhalo engezantsi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Subtitld. Yi le umhleli wemibhalo engezantsi PyQt5 ye-Gnu / Linux kunye neWindows ekuyo uvukelo lweLinux upapashe inqaku, kwaye kunomdla ukwazi nokuzama.
Ngale nkqubo Siya kuba nakho ukuhlela okanye ukuvumelanisa imixholo engezantsi kwiividiyo zethu. Uncedisa ukufunda iifomathi zefayile; I-SRT, i-SSA, i-TTML, i-SBV, i-DFXP, i-VTT, i-XML, i-SCC kunye ne-SAMI. Iya kusivumela ukuba sivule iividiyo kwiifomathi mp4, mkv, mov, mpg, webm kunye ne-ogv, ukusebenza nabo kunye nemibhalo engezantsi.
1 Iimpawu ngokubanzi zoNqabiseko
2 Faka iStitld kwi-Ubuntu
Iimpawu ngokubanzi zoNqabiseko
Le software unokufunda iifomathi ezahlukeneyo. Uncedisa ukuvula imixholo engezantsi kunye nevidiyo.
Iya kusivumela lungelelanisa ukuqala, ubude kunye nokuphela kwemibhalo engezantsi ngokuthe ngqo kumgca wexesha.
Ulwazi lweprojekthi / ubume. Inkqubo iya kubonelela ngalo lonke ulwazi esiludingayo.
Ulwazi lwexesha lekhowudi luhlala lubonakala kwaye imizuzwana iphawulwe kumgca wexesha.
Akhawunti izihlokwana ezizenzekelayo. Inika amandla okukhuphela ngokuzenzekelayo imixholo engezantsi, nangona ndandivavanya esi sicelo, andikwazi ukubenza basebenze ngokuchanekileyo.
Le nkqubo iya kusinika ithuba lokuba yongeza imibhalo engezantsi kunye nexesha lokuhleleka. Siya kuba nethuba lokucima umxholo ongezantsi.
Siya kuba nakho ukubanakho ukuthumela ngaphandle imibhalo engezantsi.
Le nkqubo ikwanayo ulwandiso lwexesha. Oku kuyakusivumela ukuya kuthi ga kumanqanaba okusondeza angama-20, isenza kube lula kuthi ukulungelelanisa imixholo engezantsi.
Inkqubo ingabonisa igridi ukunceda ukubona ngeesakhelo, imizuzwana okanye izigcawu. Ngelixa urhuqa imixholo engezantsi, sinokuhlengahlengisa ukuqala / ukuphela ngokuzihambisa zijikeleze igridi.
Idlala ekuqaleni kwesihlokwana sokugqibela / isihlokwana sokugqibela, ukusuka kwindawo yangoku yesikhombisi sexesha, nasekuqaleni kwesihlokwana esilandelayo. Ngaxeshanye sinokuhlengahlengisa isantya sokudlala kwakhona.
Hlehlisa utshintsho olungenamda. Iya kusivumela ukuba sizilungise iimpazamo ngaphandle kwemida.
Akhawunti Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo ujonge ukukhawulezisa ukuhamba komsebenzi. Sinokumisela iindlela ezimfutshane zekhibhodi.
Ezi zezinye zeempawu zenkqubo. Banga Nxibelelana nazo zonke ngokweenkcukacha ukusuka kwi Inkqubo yewebhusayithi.
Faka iStitld kwi-Ubuntu
Okokuqala, yitsho Kuya kufuneka sifake ilayibrari elandelayo kwikhompyuter yethu ukuze le nkqubo isebenze ngokuchanekileyo, nokuba siyifaka kwi-snap okanye ukuba siyifaka kumthombo:
Esi sicelo siyafumaneka kwiGnu / Linux nakwiWindows. Kwi-Ubuntu Siza kuba nakho ukufaka iStititld ukusuka Ukutshintsha. Ukuqhubeka nolu fakelo, kuya kufuneka sivule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye senze lo myalelo:
Nje ukuba ukufakwa kugqityiwe, sinako yazisa inkqubo ujonge umphanda wakho kwiqela lethu.
Ukuba ufuna susa le nkqubo kwikhompyuter yakhoKuya kufuneka uvule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye ubaleke kuyo:
Ukuba uthanda zama le nkqubo ngokuyifaka ukusuka kumthombokwi iphepha lofakelo yeprojekthi unokufumana imiyalelo yendlela yokwenza.
Uphuhliso lwe-Subtitld luqale ngaphantsi konyaka odlulileyo. Oku kuthetha ukuba isicelo asikavavanywa linani elikhulu labasebenzisi. Abenzi bale projekthi bakhuthaza bonke abasebenzisi ukuba ukuba sifumana impazamo okanye sifuna ukuba umsebenzi wongezwe kwiinguqulelo ezizayo, masikunike ingxelo ngayo nayiphi na indlela ekhoyo:
IGitLab → https://gitlab.com/jonata/subtitld/-/issues
Kwi-Twitter → https://twitter.com/subtitld
Ukungaboni ngasonye → https://discord.gg/dpkEGrE
Subtitld sisoftware yokwenza, ukukhuphela kunye nokuhlela imixholo engezantsi inomdla wokwazi nokuzama. Kuba fumana ulwazi ngakumbi malunga neprojekthi, Abasebenzisi banokundwendwela iwebhusayithi yeprojekthi. Nangona zonke iinketho ze-Subtitld zinomdla, Kwimeko apho ufumana into ongayaziyo ukuba ungayenza njani, abasebenzisi banokudibana icandelo lezifundo banikezela kwiwebhusayithi yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Subtitld, isoftware evulekileyo yokukhutshelwa kunye nokuhlela imibhalo engezantsi
I-Kdenlive 20.12 ifika ingekho ngaphantsi kwama-370 yotshintsho ukubona ukuba ingabuya kwakhona na indawo elahlekileyo
I-NetworkManager 1.28.0 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo